ယနေ့ထီဖွင့်ပွဲမှာ မိတ်ထီလာမြို့မှပဲ သိန်း ၂၀၀၀ ဆုကိုဆွတ်ခူးခဲ့(ထီပေါက်စဉ်တိုက်ရန်ပါသည်) - Shwe Yaung Lan
ပရိသတ်ကြီးရေ ဒီနေ့မှာတော့ ကျပ် ၁၀၀၀ တန်အောင်ဘာလေထီဖွင့်ပွဲကြီး ပြုလုပ်ပြီးခဲ့ပြီပဲ ဖြစ်ပါတယ်…. ထီဆုမဲများစွာထဲက အမြင့်ဆုံး ဖြစ်တဲ့ ကျပ် သိန်း ၁ သောင်းခွဲဆုကြီးကိုတော့ ထီလက်မှတ် ဓ ၃၄၁၆၁၁ နဲ့ မိတ္ထီလာမြို့ က.ည.န ရုံးဟောင်းနားမှာ နေတဲ့ ကိုစိုးနိုင်က ဆွတ်ခူးသွားတာ ပရိသတ်ကြီးတို့လည်း သိမှာပါ…
နောက်ထပ် ထူးခြားချက်တစ်ခုကတော့ ထီဆုကြီးတွေထဲက ကျပ်သိန်း ၂ ထောင်ဆုကို ဆွတ်ခူးသွားသူကလည်း မိတ္ထီလာကပါပဲတဲ့…..ပေါက်ချောင်းဈေးနားက မဖြိုးအိသိမ့်က ခိုင်ရွှေဝါကနေ ထီနံပါတ် ဓ ၉၅၁၆၇၈ နဲ့ ကျပ် သိန်း ၂ ထောင်ဆုကြီးကို ဆွတ်ခူးခဲ့တာပါ….တစ်မြို့တည်းကနေ ထီဆုကြီးတွေကို သိမ်းကျုံးဆွတ်ခူးသွားတာဗျာ… အက္ခရာကလည်း “ဓ” ချင်းတူတယ်ဗျာ..
အရင်က သိန်း ၁ သောင်းခွဲဆုကြီးဆို ဧရာဝတီတိုင်းက ပေါက်လွန်းလို့ ထီထိုးချင် ဧရာဝတီတိုင်း သွားထိုးလို့ ပြောစမှတ်ဖြစ်ခဲ့ရပါတယ်…ကဲ…ခုတော့ ထီပေါက်ချင်သလား…မိတ္ထီလာသွားလို့ ပြောရမလို ဖြစ်သွားပါပြီဗျာ….
ပရိသတ်ကြီးတို့လည်း ထီတိုက်ပြီးပြီလား..အောက်မှာ ထီ ဆု ပေါက်မဲပေါင်းချုပ်ပုံလေးကို ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်နော်… အားလုံးပေါက်ကြပါစေဗျာ…
Source : Aung Myo Myat Via.Lso Maung Maung
ပရိသတ္ႀကီးေရ ဒီေန႔မွာေတာ့ က်ပ္ ၁၀၀၀ တန္ေအာင္ဘာေလထီဖြင့္ပြဲႀကီး ျပဳလုပ္ၿပီးခဲ့ၿပီပဲ ျဖစ္ပါတယ္…. ထီဆုမဲမ်ားစြာထဲက အျမင့္ဆံုး ျဖစ္တဲ့ က်ပ္ သိန္း ၁ ေသာင္းခြဲဆုႀကီးကိုေတာ့ ထီလက္မွတ္ ဓ ၃၄၁၆၁၁ နဲ႕ မိတၳီလာၿမိဳ႕ က.ည.န ရံုးေဟာင္းနားမွာ ေနတဲ့ ကိုစိုးႏိုင္က ဆြတ္ခူးသြားတာ ပရိသတ္ႀကီးတို႔လည္း သိမွာပါ…
ေနာက္ထပ္ ထူးျခားခ်က္တစ္ခုကေတာ့ ထီဆုႀကီးေတြထဲက က်ပ္သိန္း ၂ ေထာင္ဆုကို ဆြတ္ခူးသြားသူကလည္း မိတၳီလာကပါပဲတဲ့…..ေပါက္ေခ်ာင္းေစ်းနားက မၿဖိဳးအိသိမ့္က ခိုင္ေရႊဝါကေန ထီနံပါတ္ ဓ ၉၅၁၆၇၈ နဲ႔ က်ပ္ သိန္း ၂ ေထာင္ဆုႀကီးကို ဆြတ္ခူးခဲ့တာပါ….တစ္ၿမိဳ႕တည္းကေန ထီဆုႀကီးေတြကို သိမ္းက်ံဳးဆြတ္ခူးသြားတာဗ်ာ… အကၡရာကလည္း “ဓ” ခ်င္းတူတယ္ဗ်ာ..
အရင္က သိန္း ၁ ေသာင္းခြဲဆုႀကီးဆို ဧရာ၀တီတုိင္းက ေပါက္လြန္းလို႔ ထီထိုးခ်င္ ဧရာ၀တီတိုင္း သြားထိုးလို႔ ေျပာစမွတ္ျဖစ္ခဲ့ရပါတယ္…ကဲ…ခုေတာ့ ထီေပါက္ခ်င္သလား…မိတၳီလာသြားလို႔ ေျပာရမလို ျဖစ္သြားပါၿပီဗ်ာ….
ပရိသတ္ႀကီးတို႔လည္း ထီတိုက္ၿပီးၿပီလား..ေအာက္မွာ ထီ ဆု ေပါက္မဲေပါင္းခ်ဳပ္ပံုေလးကို ေဖာ္ျပေပးလိုက္ပါတယ္ေနာ္… အားလံုးေပါက္ၾကပါေစဗ်ာ…
Previous post ချန်ပီယံဆုကာကွယ်ပွဲကို အောက်တိုဘာလလယ်မှာ စတင်ယှဉ်ပြိုင်သွားမယ့်သက်ထားသူဇာ
Next post ရွှေသားစစ်စစ် သိန်းတစ်ထောင်ကျော်ဖိုးရှိတဲ့ ထိုင်မသိမ်းနဲ့ Show လျှောက်ခဲ့တဲ့ Model ရွှေစင်